Isimo samaLanga amathathu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El Isimo sezulu I-protagonist yanamuhla kubonakala sengathi ivele encwadini yenoveli yesayensi, kepha empeleni akukho okuqanjiwe ngakho ... kuyinto yangempela futhi eyenzeka eMhlabeni kaningi kakhulu kunalokho esicabanga. Kuyaziwa ngokuthi "yisimo samaLanga amathathu" futhi kunikeza umbono omangazayo kathathu wenkanyezi yethu.
Ngokwemvelo, akusikho ukuthi iLanga seliphindaphindekile, kodwa ukuthi kungenxa ye- umphumela wokukhanya kubangelwe yimisebe yelanga emakhristini amancane eqhwa angaphakathi kwamafu. Lesi simo, ngokungafani nezinye esesike sakhuluma ngaso (njenge- uthingo lomlilo), kwenzeka kaningi, kepha asivamile ukukuqonda ngoba akuvamile ukuthi silokothe ​​sibheke iLanga.
Ngezansi kwale migqa, ungabona ezinye ezimbalwa ze- izithombe yalesi simo esimangazayo:
Izithombe - io9, I-Atmospheric and Terrestrial Phenomena, Manje usuyazi
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izithombe » Isimo samaLanga amathathu